“Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien Basketball Féminine” tontosaina ankehitriny etsy amin’ny lapan’ny fanatanjahantena sy kolontsaina Mahamasina. Nomontsanin’izy ireo tamin’ny isa 98 – 29 ny vehivavin’ny FUZ'ELLIPSE avy any Mayotte omaly teo amin’ny andro voalohan’ity fifaninanana ity. Vao tany amin’ny “1er quart temps” dia efa nitarika alavitra 22 – 1 ny Sbbc.
Marihana fa mifanindran-dalana amin’ity fifaninanana ity koa ny fifaninanana “Road To Bal” sokajy lehilahy hiarahana amin’ny NBA ka handraisan’ny Gnbc Malagasy anjara. Anio alakamisy 31 oktobra ny andro faha-2 amin’ireo fifaninanana iraisam-pirenena roa ireo.
Rahampitso 01 novambra sy ny 02 ary 03 novambra 2019 kosa no hanatanterahana eo amin’ny “Parking” ivelan’ity lapa ity ny fifaninanana andiany faha-2 amin’ny “Edition Challenge Zone 7 Basket 3X3”.
Sary Fair Play sy fahatsiarovana tetsy Mahamasina omaly